Mac App Store တွင် 'Tomb Raider: Anniversary' အသစ် ငါက Mac ပါ
Mac App Store တွင် 'Tomb Raider: Anniversary' အသစ်
သင်္ချိုင်း Raider: နှစ်ပတ်လည်နေ့ developer များကမကြာသေးမီကမိတ်ဆက်ခဲ့သည် Feral Interactive လီမိတက် ဤ နိုဝင်ဘာလ 6နှင့်စျေးနှုန်းဖြစ်ပါတယ် 9,99 ယူရို။ Tomb Raider: နှစ်ပတ်လည်နေ့သည် Tom Raider နှင့်အတွေ့အကြုံရှိသောအသစ်ရောက်ရှိလာသောသူများနှင့်စွန့်စားသူများချစ်ကြိုက်မည့်အတွေ့အကြုံသစ်ဖြစ်သည်။ ဒီဂိမ်းဟာစပိန်လိုလုံးဝမဟုတ်ဘူး။
ဒီ Tomb Raider မှာ Lara လိုအပ်ပါတယ် Atlantis မှဒဏ္myာရီ Scion ကိုပြန်လည်ရယူပါထို့ကြောင့်ရာစုနှစ်များစွာဝှက်ထားသောသူ၏ ဦး တည်ရာကိုရောက်ရှိရန်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းခရီးစတင်ရန်လိုအပ်သည်။ သို့ delve ဘုရားနှင့်မိကျောင်း၏ domains များ ဘာမျှမကပုံရသည်အရာဖြစ်သည့်အတွက်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဇာတ်လမ်းထဲမှာ။ ရှေးဟောင်းဂရိ၊ ရှေးအီဂျစ်နှင့်ပျောက်သွားသည့်အတ္တလန္တိတ်စသည့်ယဉ်ကျေးမှုဟောင်းများ၏အပျက်အယွင်းများကိုစူးစမ်းပါ။ သင်အနိမ့်ဆုံးလိုအပ်ချက်များကိုဖတ်ရှုဖို့အကြံပြုလိုပါတယ် အဲဒါကိုမ ၀ ယ်ခင်ဂိမ်းကိုခင်ဗျားဆက်ဖတ်ပြီးနောက်မှာထည့်လိုက်တယ်။
လျှို့ဝှက်ရှေးဟောင်းပစ္စည်းများကိုရှာပါ အပိုဆောင်းအကြောင်းအရာသော့ဖွင့်ရန်အဆင့်တိုင်းအတွက်နှင့်အတူကစားရန်မတ်မတ်ဝင်ငွေနှင့်အချိန်စမ်းသပ်မှုဖြည့်စွက်ရန်။ Lara ၏အိမ်၊ Croft Mansion ၏ထောင့်တိုင်းကိုစုံစမ်း။ လျှို့ဝှက်ချက်များကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်ပါ။ ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောတိရိစ္ဆာန်များနှင့်သဘာဝလွန်ရန်သူများနှင့်ရင်ဆိုင်ပါဝံပုလွေများမှသည် mutant အထိနှင့်ပြင်းထန်သော T-Rex ။
Controller အမျိုးအစား ၁၀၀ ကျော်နှင့်တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သည်။ စာရင်းအပြည့်အစုံကြည့်ရှုရန် ရိုင်းစိုင်းထောက်ခံမှုစာမျက်နှာ.
အနည်းဆုံးလိုအပ်ချက်များ - ပရိုဆက်ဆာ: ၁.၈ GHz Intel၊ RAM: 1,8GB၊ ဂရပ်ဖစ်ကတ် - ၂၅၆ MB၊ အခမဲ့နေရာ - ၅၀ ဂစ်ဂါ။
အောက်ပါဂရပ်ဖစ်ကဒ်များကိုမထောက်ပံ့ပါ။ ATI X1xxx စီးရီး၊ Intel GMA စီးရီး
လောလောဆယ်ဂိမ်း ဖြစ်ကြောင်း format လုပ်ထားသော volumes များတွင် run ။ မရပါ။.
တင်ပါတယ်: 06 / 11 / 2015
အရွယ်: 2.90 GB ကို
ဘာသာစကား: စပိန်, ဂျာမန်, ပြင်သစ်, အင်္ဂလိပ်, အီတလီ
ဆော့ဖ်ဝဲရေး: Feral Interactive Ltd.
compatibility: OS X 10.9.5 သို့မဟုတ်ထိုထက်နောက်မှ
ကုန်ချ သင်္ချိုင်း Raider: ဖြောင့်ကနေနှစ်ပတ်လည်နေ့ Mac က App Store ကို အောက်ကလင့်ခ်ကနေ။ ငါဂိမ်းကိုကြိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲဒါရဲ့ထိပ်ပိုင်းမှာကြီးမားတဲ့စျေးနှုန်းရှိတယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Mac ပရိုဂရမ်များ » အားကစားပြိုင်ပွဲ » Mac App Store တွင် 'Tomb Raider: Anniversary' အသစ်
#AuroraSoydeMac MacPhun ၏ Aurora HDR အက်ပလီကေးရှင်းသုံးခုပေးဆပ်မှု